Music — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Si uu u gudbiyo farriin uu, Trip qaaday hab ka duwan in lagu qoro waqtigan agagaarka. Halkii la shaqeeyaan saarayaasha badan, ayuu keliya la soo saare muddo dheer Gawvi shaqeeyay album oo dhan ee uu studio Atlanta. Sonically, hal horeysay Kac ee “Shweet” bandhigayaa tayo aad u weyn oo ah labada Gawvi iyo Trip Lee. Iyada oo ay wax soo saarka abuurmaaya, nods track in classic hoos koonfurta cigta Houston la New York-style sheeko ah. Aayado Trip ayaa sii sida cad sida ay muhiim u tahay. Dhanka kale, “Victory Sweet” dhistaa ka aayadda yar galay jillaab xaadha in uu dhakhso bi'adda sida socodka faafa Trip ee lasugo. “Manolo” isaga arko mar kale kooxda la Records Reach’ nin weyn ee u gaar ah oo saaxiib dhow Lecrae. Wadajir, oo labadoodaba waxaa ka dhajisan kale qaabka hip-hop si xirfad leh u dhexeeya rashka iyo mijana duntu.
Life The Good
album The riyooyin New furmay, muuqan J.R. iyo Sho Baraka, taas oo baraaruga ah inay xaqiiqo ah in ceyrsaneysa hamiga danayste noo hayn doonaa uga noqdeen nolosha Ilaah badan dooni innaga dhammaanteen u bixiyey. Trip soo socota la Robot heesta xor ?? oo waxaan ahay Good muuqan Lecrae, oo ku faana in xorriyad, raalli iyo ammaanka laga helay Masiixa. On Fantasy ??, muuqan Suzy Rock, Trip si taxadar bannaanka u ah riyada aduunka waxaan sidoo kale ku nool yihiin ama dheer iyo qarow ku soo jeedin doonaa in ay noqon. iskaashi kale la KB, Andy Mineo, Jimmy Needham, V. Rose iyo kuwo kale oo badan, dabaal quruxda nolosha by emancipator runta ah keenay, ku abuuray iyo mid muujiya in dhammaan waa wanaagsan yahay,. Inkasta oo wax soo saarka ka Dirty Rice, Alex Medina, G-Styles iyo Joseph Prielozny siiyaan hortegi sharaf for qanacsanaanta nolosha ee ku dhex Masiix.
The album Man Up, in lala xilli Man Up, oo doonaya in ay ka jawaabaan su'aashan in ay bixinayaan soundtrack ah in dhaqdhaqaaqa! Lecrae, Trip Lee, Sho Baraka, Tedashii, Pro, KB iyo Andy Mineo wacayso rag dhaqanka Hip-hop in ay xooggooda kitaabiga run soo koobay by: taasoo keentay dhiiranaanshaha, caajisnimo diiday, aqbalayaan mas'uuliyadda iyo daba-hoosaysiinta, iyada oo tawbadkeen iyo rumaysad in Masiix.
Inta u dhaxaysa Laba Caalamka
Trip Lee qudhiisu ka heli badanaa adag, laakiin ugu dambeyntii balanqaaday gobolka–Qaddarray nolosha weligeed ah, weli loo xilsaaray in ay dhex maraan this mid ka mid. Uu album saddexaad, Inta u dhaxaysa Laba Caalamka bixisaa dhagaystayaasha a collection of shakhi shakhsi in celinayaan farxadaha iyo dhammaan aragnimo Mu'miniinta aan halganka. horyaalka furitaanka track The, Real Life Music,?? koobaya waxa ay ka sugayaan mashruuca ugu dambeeyay ee Trip.
Ma waxaad si cad isaga arki? Back la disc labaad, Trip Lee yahay oo ku sugan si aad u aragno Eebe si cad u dhex gashto ee Qorniinku, idin siinayo a 20/20 aragti. muuqan cajiib ah, -soo-saarka ee kala duwan, oo ay la socdaan qaar ka mid ah muuqaalada ka Lecrae, Tedashii, Shai Linné, iyo kuwa kale.
Ugu horeeyay Trip Lee ayaa Album! Tani waxay xubin ka yar iyo unashamed oo ka mid ah 116 Clique hoos u dhigay qaar ka mid ah kulaylka halis on “Hadday ogyihiin”. Ma doonayo in aad ka maqnaan doona on this mid ka mid. Trip Lee taabto on ton ah arrimaha kala duwan ee aad la kulmi in aad la socod Masiix, ka sida ay tahay in aan baaro nolosheena gaarka ah cilmiga halis ah qaar ka mid ah oo ku saabsan qofka 2aad ee Saddexmidnimada. Hubi inaad seef laboodkiisa sababay CD this iyo qodaan ilaa lyrics ah. Inaad horey u maqlay Trip Lee on the 116 Clique duwidda Album iyo haatan waxaad ka heli kartaa heshiis dhabta ah uu marka hore sii daayo dhererka buuxda ula-soo-saarka by Tony Stone, Jr, Lecrae, iyo in ka badan, oo lagu daray qaar ka mid ah muuqaalada weyn Ambassador, Lecrae, Tedashii, Olol iyo kuwa kale!